Tsy nilaza mihitsy ny mombamomba ny olona nandefa io taratasy i Andry Rajoelina, fa kosa naneho fa ny fankatoavany no andrasan’ny mpandefa ny taratasy. Avy amin’i Lucile Cornet-Vernet, mpamorina sady Filoha lefitry ny “Maison de l’Artemisia” any Frantsa ilay taratasy. Io Maison de l’Artemisia io dia fantatra tamin’ny resaka ady amin’ny tazomoka tamin’ny alalan’ny fampiasana ity zava-maniry ity. I Chine dia nampiasa ny Artemisia hisorohana, hanatsaharana, ary hisakanana ny fipariahan’ny covid-19, araka ny revue scientifique nivoaka tany Chine ny 13 martsa, hoy i Lucille Cornet ao amin’ny taratasiny. Manana tombony i Afrika amin’ny hahafahana manao fandalinana ara-pitsaboana na “étude Clinique” ao anatin’ny roa herinandro, raha ny voalazan'ilay hafatra. Nalefa niaraka tamin’izany ny paipaika na ny “protocole” izay nambara fa efa ao anatin’ny fanatanterahana ny “étude clinique” any Frantsa. Nambara tao anatin’izay fa ny Artemisia dia heverina ho isan’ny singa hahafaha-misoroka sy mitsabo ny coronavirus noho izy efa nahomby tamin’ny ady amin’ny tazomoka, ary nampiasain’ny sinoa nanomboka tany amin’ny fanombohan’ny coronavirus ny faramparan’ny taona 2019. Ny faharefoan’i Afrika sy ny krizy mafy mamely izao tontolo izao no isan’ny namporisihana amin’io hanaovana andrana haingana io. Ireo Ministeran’ny fahasalamana rehetra taty Afrika dia nandefasana io taratasy io avokoa, raha ny nambaran’i Lucile Cornet-Vernet. Nanaiky hatramin’ny hanaovana “essai clinique” mifototra amin’ny Artemisia avokoa ny ankamaroany, ka isan’izany i Madagasikara, Rwanda, Côte d’Ivoire,… Ny an’i Madagasikara, dia iny efa nambaran’ny Filoha Rajoelina iny ny fahombiazany. Na tsy mbola nankatoavin'ny OMS aza, dia mety ho azo heverina ihany ny haha lasa iraisam-pirenena ilay fanafody, fa ny endriny sy ny fomba hampiasana azy no mety hisy fanatsarana miandalana.